Kedumba Escape - I-Airbnb
Indlu encane ibungazwe ngu-Kasey
Isitudiyo esibanzi, esikhanyayo, esisanda kulungiswa esinesitezi esinelanga, esizimele maphakathi neKatoomba. Ibanga lokuhamba elilula lokuya ezitimeleni kanye ne-Explorer Bus. Eduze kwezindawo zokudlela nezitolo. Ukuhambahamba okufushane ukuya e-Echo Point, Odade Abathathu, Izwe Le-Scenic kanye nokubukwa okuhle kwe-Blue Mountains.
Isitudiyo sitholakala engadini yekhaya lethu eCentral Katoomba. Inokungena kwayo emgwaqeni. Indlela ekhanyiswe kahle eya ngasemnyango wendlu enkulu iholela emnyango ongaphambili ukuze labo abafika sekwephuzile bangakhubeki ebumnyameni bezama ukuthola indawo yokungena. Isitudiyo sihlukaniswe nendlu enkulu ngothango nesango ukuze nakuba useduze nendlu enkulu, indawo yakho iyimfihlo ngokuphelele. Isitudiyo sisanda kulungiswa. Ivulekile kakhulu, inezindawo zokuhlala ezihlukene nezindawo zokulala, kanye nedekhi yangasese ebheke i-Kedumba Creek, lapho ungadla khona ukudla, ufunde incwadi, noma ulalele izinyoni. Uzothola yonke into oyidingayo ngaphakathi kwebanga lokuhamba kalula: izitolo, izindawo zokudlela, izindawo zokuhamba ezinhle kanye nemibono ebabazekayo. Nakuba usenkingeni, uzozizwa sengathi ukude.
- umbhede wendlovukazi onamatafula aseceleni kombhede nezibani zokufunda
- Igumbi lokugezela elihle le-ensuite elineshawa yamanzi ashisayo eqhubekayo kanye nokufudumeza kwangaphansi
- Ukushisa/i-air conditioning
- Ikhishi elinamapuleti, i-cutlery, i-microwave, iketela, i-toaster nesiqandisi
- I-TV yedijithali ene-Apple TV kuhlanganise ne-Netflix
- Igumbi lokuphumula netafula lababili
- Ideskithophu elincane lomsebenzi kanye neshalofu lezincwadi
- Idesika yangasese ebheke endaweni yasehlathini enetafula nezihlalo zangaphandle
4.95 · 289 okushiwo abanye
Isitudiyo sisesimweni esihle sokuhambela i-Echo Point ukuze ubuke ukushona kwelanga. Kungaba ngamamitha angu-600 kuphela uma uphambana nezitolo ezinkulu eKatoomba, kanye nezindawo zokudlela eziningi ezitholakalayo. Uma useKatoomba kweminye yemikhosi yethu eminingi yobuciko noma yokugijima, uzocindezelwa kanzima ukuthola indawo elula kakhudlwana.
Ukhiye westudiyo usebhokisini elikhiyiwe eduze komnyango ongaphambili, ngakho-ke asikho isidingo sokuhlela ukuthathwa kokhiye noma ukushiya. Sihlala endlini enkulu, ngakho ngokuvamile ngeke sibe kude uma kwenzeka kukhona okudingayo. Sihlala sikujabulele ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo mayelana nezinto ezinhle ongazenza noma izindawo zokudlela endaweni.
Ukhiye westudiyo usebhokisini elikhiyiwe eduze komnyango ongaphambili, ngakho-ke asikho isidingo sokuhlela ukuthathwa kokhiye noma ukushiya. Sihlala endlini enkulu, ngakho ngokuvam…
Inombolo yepholisi: PID-STRA-13523-2